धनि हुने व्यक्तिको हातमा हुन्छ यस्तो रेखा, तपाईको पनि छ की ? – Online Saptarangi
October 18, 2020 October 18, 2020 Prakash WaibaLeaveaComment on धनि हुने व्यक्तिको हातमा हुन्छ यस्तो रेखा, तपाईको पनि छ की ?
हस्त रेखा विज्ञानले मानिसको सबै कुरा हातका रेखाले निर्धारण गर्ने बताउँछ । यी रेखा हाम्रो जन्मकै क्रममा बन्ने र यीनको प्रभाव जीवनभर रहने बताइन्छ । यहाँ हामीले धनी हुने ब्यक्तिका हातका रेखा कस्ता हुन्छन् भन्ने विषयमा चर्चा गरेका छौं।
जौको चिन्ह : समुन्द्र शास्त्रका अनुसार जुन ब्यक्तिको हातमा औंलाको जौ जस्तो चिन्ह हुन्छ त्यस्ता ब्यक्ति निक्कै धनीमानी र सुखी हुने बताइन्छ । यो चिन्ह हुने ब्यक्ति भाग्यमानी पनि हुने गर्छन् । समाजमा प्रतिष्ठिन हुने र राजनीतिमा लागे सफल राजनीतिज्ञ हुने हस्त रेखा विज्ञानको दावी छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
शंखको चिन्ह : अध्यात्मको दृष्टिले हातमा शंखको चिन्ह हुनु निक्कै राम्रो मानिन्छ । यस्ता चिन्ह भएका ब्यक्ति बुद्धीमान हुने बताइन्छ ।
जुन ब्यक्तिको चार वटा औंलामा शंकको चिन्ह छ त्यस्ता ब्यक्तिले सरकारी उच्च पदस्थ पद प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ। ५ बटै औंलामा यस्तो चिन्ह छ भने विदेश यात्रा भैरहने हुन्छ । विदेशमा धन आर्जन पनि राम्रो हुने मानिन्छ।
जुन ब्यक्तिको ६ वटा औंलामा यस्तो चिन्ह छ औंलामा छ भने यसले धर्मकर्ममा विश्वास हुने ब्यक्ति जनाउँछ । यिनीहरु अध्यात्मिक प्रवचनमा पनि तीक्ष्ण हुन्छन् । १० बटै औंलामा शंख हुने ब्यक्ति महात्मा हुन्छ भने ८ वटा शंख हुने सुखी र धनी हुन्छन्।
हस्त रेखामा हातमा हुने चक्रकोबारेमा पनि चर्चा गरिएको छ । जुन ब्यक्तिको १० वटै औंलामा चक्र छ भने त्यसता ब्यक्ति संसार जित्ने ब्यक्ति हुन्छन् । १ मात्र औंलामा चक्र भएमा विद्वान हुन्छ । २ औंलामा चक्र छ भने सुन्दर हुने मानिन्छ । भने ३ औंलामा चक्र हुने ब्यक्ति सुखी हुन्छन् र यस्ता ब्यक्तिलाई भोग र विलाश मन पर्छ ।
सूर्य पर्वत : हातको अनामिका औंलाको फेंदमा सूर्य पर्वत हुन्छ । सूर्यको सम्बन्ध राजनीतिक र सरकारी उच्च क्षेत्रसँग मानिन्छ । सूर्य रेखा सफा छ भने यस्ता ब्यक्ति सरकारी उच्च पदमा पुग्छन्। त्यसमा त्रिभुज समेत छ भने उनीहरुको प्रभाव देशमा मात्र होइन विदेशमा समेत हुन्छ।
पसल तथा व्यवसाय ब’न्द गर्न प्रशासन’को आयो यस्तो निर्देशन
लक्ष्मीलाई खुसी राख्न यी चिज चढाउनु’स् , बन्नुहुनेछ माला’माल
सोह्रखुट्टेमा ग्यास सिलिण्डर विस्फोट, ११ जना घाइते
झापामा यस्तो कहालीलाग्दो घटना ! २१ वर्षिया चेलीकाे पुछियो सिन्दुर, ३ वर्षको छोरीले ‘बाबा खै’ भन्दा मन थाम्न सक्दिनन् (भिडियो हेर्नुस्)
अन्तत: भिटेनले माफी मागे ! ‘प्रहरीले बला’त्का’रीलाई पक्रनुपर्छ, र्‍यापर लाई होइन’ भन्दै पोखे आक्रोस (हेर्नुहोस भिडियो)